Ahoana ny fomba hanaovana teti-bola famoronana tranonkala | Soso-kevitra sy loharano | Famoronana an-tserasera
Ahoana ny fomba hanaovana teti-bola famoronana tranonkala | Soso-kevitra sy loharanom-pahalalana
Lua louro | | Famolavolana tranonkala
Ny zavatra sarotra indrindra rehefa manomboka miasa eo amin'ny tontolon'ny famolavolana tranonkala dia tsy maintsy atao manaova teti-bola. Io no dingana sarotra indrindra raisina ary ilay mitondra antsika hanakaiky kokoa ny tontolon'ny asa ary manalavitra antsika amin'ilay mpianatra. Ary isika rehetra dia misalasala amin'ny zavatra iray ihany: mandoa vola be ve aho? Inona no tsy maintsy andoavako vola? Ahoana no fanoratako azy?
Ao amin'ny Creativos Online izao miresaka an'io olana io ihany izahay fa eo amin'ny sehatry ny famolavolana sary, ary hitanay fa tena manampy anao ireto lahatsoratra ireto. Noho io antony io dia nanapa-kevitra ny hanoratra ity karazana ity aho hitari-dalana amin'ny fomba fanaovana a teny famoronana tranonkala, izay antenaiko fa mahasoa anao. Tadidio fa afaka manome hevitra momba azy ianao ao amin'ny faritra misy ny hevitra ao amin'ny faran'ny lahatsoratra.
1 Ireo anton-javatra misy fiatraikany amin'ny tetibolan'ny famolavolana tranonkala
1.3 Ny votoatiny
1.4 Ny toetr'andro
1.5 Fiovan'ny mpanjifa
1.6 Haben'ny mpanjifa
2 Andinin-teny momba ny famoronana tranonkala
3 Loharano hanampy anao hanoratra teti-bola hamoronana tranonkala
Ireo anton-javatra misy fiatraikany amin'ny tetibolan'ny famolavolana tranonkala
Web nanao "bareback": izany hoe, tsy misy mpitantana atiny. Tsy maintsy manoratra kaody HTML, CSS ary PHP ianao hametrahana ny faritra tsirairay amin'ny tranokalanao, manapa-kevitra ny amin'ny endriny, sns. Ny mpanjifa, raha te hanova ny atin'ny pejy, dia mila mianatra mivezivezy eo anelanelan'ny kaody raha hanao izany (tena tsy mahazatra) na tsy maintsy manatona antsika hangataka teny namboarina hanavao izany.
Web miaraka amin'ny CMS (WordPress, Prestashop, Magento, Joomla ...): miaraka amin'ny mpitantana atiny. Amin'izany fomba izany, ny mpanjifa dia hanana tontonana fitantanana mahomby sy ahazoana aina izay ahafahan'izy ireo manavao ny atiny manokana nefa tsy mila ny saintsika. Eny, mila anay ianao rehefa manavao ny kinova CMS, mampiditra fampiasa, sns.
môdely maimaim-poana: toe-javatra tsy mahazatra. Izahay dia hitaky vola amin'ny fametrahana ny maodely sy ny fanaingoana ireo fototra (toy ny logo an'ny mpanjifa).
Modely maimaim-poana manokana: koa, tsy fahita firy. Izahay dia hitaky vola mitovy amin'ny fizarana teo aloha miampy ny fanaingoana ny lokon'ny tranonkala, ny firafitry ny atiny (endritsoratra, ny habeny, ny sisiny ...), sns.
Modely premium: mahazatra indrindra. Tsy maintsy miantoka ny vidin'ny maodely manokana izahay, ny fametrahana azy ary ny fanaingoana ireo fototra.
môdely Premium namboarina: ny mahazatra indrindra. Amin'izay voalaza tao amin'ny fizarana teo aloha, ampio ny fanaingoana ireo loko amin'ny tranonkala, ny firafitry ny atiny, ny fametrahana plugin iray hahazoana singa manokana (slider ...).
famolavolana hatrany am-piandohana: izany hoe, fanoratana kaody HTML sy CSS madio ary famolavolana ireo singa sary rehetra ao amin'ny Photoshop. Io no safidy lafo indrindra, mazava ho azy, noho ny fotoana tokony hanokanantsika azy.
Ho bebe kokoa fizarana, teti-bola ambonimbony kokoa. Lojika, sa tsy izany?
Ny vidin'ny SARY ny tranonkala dia ho entin'ny mpanjifa. Tokony hatao mazava tsara hatramin'ny voalohany. Ary tsy mitovy izy io raha tsy maintsy mitady ny sary ao anaty tahiry sary isika (ho takianay izany) fa tsy ny client no mandefa izany aty aminay.
fiteny: Tsy mitovy ny manao tranokala amin'ny fiteny iray fa tsy manao azy amin'ny roa na telo. Ny tsara indrindra dia ny mpanjifa foana no manome antsika ireo lahatsoratra nadika.
Ohatrinona kely kokoa ny fotoana Ny mpanjifa dia mamela antsika hanao ny tranokala, ny haingana kokoa hiasantsika ary ny lafo kokoa ny tetikasa.
Toy ny amin'ny famolavolana sary, amin'ny vidiny voalohan'ny tetibola dia tsara ny manondro ny isan'ny hevitra maimaimpoana (ho antoka) dia mieritreritra izahay fa afaka manao ny client. Vantany vao nihoatra io isa io dia tsy maintsy manangona ny vola natondro isika. Ny olona sasany, raha tokony handoa vola isaky ny fanovana dia mitaky ny ora handraisana azy.
Tsy mitovy ny manao tranokala ho an'ny mpiasa kely miasa tena izay manomboka ny fiainany, fa tsy ny manao pejy ho an'ny zotram-pirenena iray.
Andinin-teny momba ny famoronana tranonkala
Voalohany indrindra: ny angon-drakitra ho an'ny mpanjifa, ny data, ny daty, ny isa faktiora ...
Sehatra fampandrosoana sy fitaovana
Volavola sy firafitra
Hosting sy sehatra
Fiofanana sy fanampiana
Loharano hanampy anao hanoratra teti-bola hamoronana tranonkala
Modely momba ny tetibolan'ny tranonkala Creativasfera
Modely momba ny teti-bola famoronana tranonkala (nanomboka tamin'ny 2009)
Ohatra amin'ny fifanarahana, novolavolaina tsara ary "tsy ara-potoana"
Saran'ny sy teti-bola ho an'ny fampandrosoana web
Ohatra amin'ny taha
Torohevitra rehefa manomana teti-bola
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Famolavolana tranonkala » Ahoana ny fomba hanaovana teti-bola famoronana tranonkala | Soso-kevitra sy loharanom-pahalalana
noriaki dia hoy izy:
Tena mahaliana, na izany aza heveriko fa mila manampy zavatra tena manan-danja aho: diniho ny fotoana hamokarana ilay tranonkala. Indraindray ny mpiantoka dia tsy manana ny zava-drehetra vonona, na misy mitaona ny fanapahan-kevitra eo anelanelany ary manova be ny teti-bola. Raha fintinina dia mino aho fa tsy maintsy mamakafaka hatrany am-piandohana ny fotoana ahafahan'ity mpanjifa ity mitazona antsika (fanampiny) ivelan'ny famoronana ny tranokala.
Mamaly an'i noriaki
Orballa dia hoy izy:
Tena marina. Tena zava-dehibe ny fiheverantsika ary ny fahafantarana fa ny fifampiraharahana amin'ny mpanjifa izay manana hevitra mazava tsara momba izay tadiaviny dia tsy mitovy amin'ny fifampiraharahana amin'ny olona iray izay mandeha eo anelanelan'ny foto-kevitra samihafa. Tena sarotra ny manisa ny ora marina ...
Mamaly an'i Orballa
josecabellonet dia hoy izy:
Amin'ny zavatra niainako dia afaka milaza aho fa samy hafa ny mpanjifa tsirairay. Ny hevitra ankapobeny izay nohazavaina tao amin'ilay lahatsoratra dia tsara, saingy amin'ny farany dia ny zavatra niainantsika manokana no hitarika antsika amin'ny fahombiazana na tsy fahombiazana.
Nandritra izay taona niasako izay dia vitsy ny mpanjifa nanome ahy izay rehetra ilaiko (logo, lahatsoratra, sary, sns.) Ara-potoana. Ny olona iray dia mety ho henjana amin'ny fomba fiasa, fa ny zava-misy kosa mamely anao ary raha te hiasa amin'ny farany ianao dia mila mampifanaraka kely amin'ny mpanjifa tsirairay ...
Mamaly an'i josecabellonet
Web Design León dia hoy izy:
Voasarona tsara ireo teboka hamoronana teti-bola handrafetana pejy web. Ilaina ny miditra lalindalina kokoa amin'ny famolavolana tranonkala ho an'ny finday sy ny takelaka, izay mahazo mpitsidika bebe kokoa avy amin'ireo fitaovana ireo.
Valiny amin'ny Web Design León
Tranonkala toekarena dia hoy izy:
Ny torohevitro lehibe momba ny teti-bola dia ny mampiditra ny antsipiriany rehetra ihany koa? ny fomba hametrahana ny antsipirian'ny endriny, ny endrika fandoavam-bola ary ny fotoana fandefasana azy, mba ho mazava ny roa tonta alohan'ny hanombohana ny asa ary hialana amin'ny tsy fifankahazoan-kevitra manaraka. Ny tsara indrindra dia ny mamela ny zava-drehetra an-tsoratra amin'ny antontan-taratasy izay ananantsika roa ary ampidirina ao ny volavolan-kevitra momba ny endrika sy ny tetibola. Miarahaba azy ireo aho noho ny fandraisan'anjaran'izy ireo, nataon'izy ireo nanamora kokoa ahy ity fomba ity, izay toa manahirana tamin'ny voalohany fa amin'ny farany kosa tsy maintsy vita. Fiarahabana avy any Mexico.
Valiny amin'ny tranokala mora vidy